Slot Games စလော့ဂိမ်း Archives - Myanmar Online Game
Select Author admin Kham Onn Khin Hsu Small Pango Win Win Aye Select Category Baccarat - ဘာ့ခရက် Black Jack (21) Card Games ဖဲကစားနည်း Casino ကာစီနိုဂိမ်းများ Fish Shooting ငါးပစ်ဂိမ်း Knowledge Roulette ရိုးလက် Slot Games စလော့ဂိမ်း Sport Betting Uncategorized
Slot Games စလော့ဂိမ်း
Classic Slot တှဘောလို့မပြောကျကှယျသှားတာလဲ?
Khin Hsu August 15, 20200Comments
ဒီနေ့ခေတ် Slot ကစားနည်းအသစ်တွေက အခြေခံထားကြရတဲ့ Traditional Slot Machine တွေက ပုံမှန်အတိုင်းပဲပိုပိုပြီး ရေပန်းစားလေ့ရှိပါတယ်။ Classic Slot တွေက ဒီနေ့ခေတ် Modern Slot တွေလိုပဲကစားလို့ကောင်းတယ်လို့ ကစားသူတွေကပြောကြပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုရင် အပေါ်ယံခြုံကြည့်မယ်ဆိုရင် အရင်းနည်းနည်းနဲ့ အမြတ်အများကြီးပြန်ပေးနိုင်တဲ့ကစားနည်းခြင်း တူနေလို့ပါပဲတဲ့။ Traditional Slot တွေကအထူးသဖြင့်တော့ ဒီနေ့ခေတ်သစ် Slot တွေလို Feature…
Khin Hsu June 19, 20200Comments
ဟာ… သွားပါပြီ၊ ငါတို့ Boss ရှေ့မှာ ကြောင်မဲတစ်ကောင်ဖြတ်သွားတယ်။ အဲ့တာဆို ခုချိန်ကစပြီး သူကံဆိုးတော့မှာပေါ့။ ဒါပေမယ့် Boss ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ အေးဆေးပဲ လှုပ်တောင်မလှုပ်ဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုရင် ဒီလိုအစွဲတွေ၊ ယုံတမ်းစကားတွေကို ဂရုမစိုက်တက်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လို့ပါ။ သင်ကရော ဒီလိုအစွဲမျိုးရှိတတ်သူတစ်ဦးလား? Slot မကစားခင်မှာ ပိုပြီးအနိုင်ရအောင် “အကြံပေးချက်” တွေကိုလုပ်ပြီးမှကစားရင် ပိုအနိုင်ရမယ်လို့ထင်ပါသလား? ဒါမှမဟုတ် ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ စလော့ကစားနည်း တွေရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကို…
Casino Slot လောကမှာ ရေပန်းစားစေဖို့
Khin Hsu April 5, 20200Comments
ဒီနေ့မှာတော့ Beginner ကနေ Professional ကစားသူပေါင်းမျိုးစုံနဲ့ လည်ပတ်နေတဲ့ ဒီ Casino Slot လောကမှာ ကိုယ့်က သူများတွေလိုပဲမဟုတ်ပဲ ပိုပြီးထင်ရှားနေအောင် နေနိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့ Online Casino တစ်ခုမှာစတင်ဖို့ပါပဲ။ Online Casino တွေမှာက အဝတ်အစား၊ ကိုယ်အမှုအရာ၊ နှုတ်အမှုအရာတွေ ဘာမှမလိုပဲ ကိုယ့်ကစားပုံကစားနည်းနဲ့တင် Impression အများကြီးတင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ။ မတူတဲ့ကစားနည်းတွေမှာ…
Khin Hsu March 4, 20200Comments
Zeus Slot ဂိမ်းဟာဆိုလို့ရှိရင် သမိုင်းမှာပင် အလွန်ကျော်ကြားခဲ့သော ကာစီနို ဂိမ်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အလျားလိုက်ကစားရသည့် ဂိမ်းမျိုးဖြစ်ပြီး လျှင်မြန်သော၊ လေ့လာရန်လွယ်ကူသော ဂိမ်းတစ်မျိုးလည်းဖြစ်သည်။ လက်ရှိမှာဗာရှင်း (၃) မျိုးရှိနေပြီးဖြစ်ပြီး ဗာရှင်း (၂)မှာမူ ကစားလိုင်းပေါင်း (၂၅)လိုင်းရှိပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ ဗားရှင်း(3)မျိုးအကြောင်း ဖော်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုတော့ မိတ်ဆွေအနေနဲ့ မည်သည့် Zeus Slot တွင်မဆို ကျွမ်းကျင်စွာဆော့ကစားနိုင်ပြီပေါ့။ ပထမဗားရှင်း…
Slot Games စလော့ဂိမ်း Casino ကာစီနိုဂိမ်းများ Uncategorized
Slot Random Number Generator
Khin Hsu February 23, 20200Comments
Slotကိုစတင်ကစားတဲ့(သို့မဟုတ်)ကစားနေတဲ့ ကစားသမားတွေ မေးတတ်တဲ့ မေးခွန်းတွေရှိပါတယ်။ Slotစက်တွေဟာ ယုံကြည်လို့ရပါ့မလား? Slotစက်တွေ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ? စသဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမေးခွန်းတွေရဲ့အဖြေကိုရဖို့အတွက် ပထမဆုံး Slot Random Number Generator(RNG) မြန်မာအခေါ် ကျပန်းဂဏန်းထုတ်စက်အကြောင်း သိထားဖို့လိုပါတယ်။ Random Number Generator (RNG) ဆိုတာဘာလဲ? RNG ဆိုတာ ကွန်ပြူတာပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး…
Casino ကာစီနိုဂိမ်းများ Slot Games စလော့ဂိမ်း
Live Dealer Game တွေနဲ့ Animated ဂိမ်းတွေကြားကကွာခြားချက်
Khin Hsu February 4, 2020 1 Comment
ကြာမြင့်လှတဲ့အချိန်တွေကတည်းက Baccarat၊ Poker နဲ့ Roulette ဂိမ်းတွေဟာ onlineကော၊ offlineမှာပါ လူကြိုက်များလာခဲ့ပါတယ်။ ဒီဂိမ်းတွေကို အွန်လိုင်းမှာကစားခြင်းဖြင့် အားသာချက်တွေကတော့ ပုံစံနှစ်မျိုးနှစ်စား ရွေးချယ်နိုင်တာပါပဲ။ Animatedဂိမ်းလို့ခေါ်တဲ့ ကွန်ပြူတာဆော့ဝဲလ်တွေ အသုံးပြုထားတဲ့ ဂိမ်းအမျိုးအစားရယ်၊ Live Dealer Game လို့ခေါ်တဲ့ ဖဲဝေသူတွေ၊ ဖဲကဒ်အစစ်တွေကို အသုံးပြုပြီး တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုတွေအပေါ်မှာ ဝင်ရောက်ကစားနိုင်တဲ့ ဂိမ်းအမျိုးအစားဆိုပြီး နှစ်မျိုးနှစ်စား ရှိပါတယ်။…
Slot Games စလော့ဂိမ်း Casino ကာစီနိုဂိမ်းများ
ထူးခြားတဲ့ Orient Animals Slot
Khin Hsu February 2, 2020 1 Comment
ဒီနေ့မှာတော့ JDBYG ရဲ့ Slot ကစားနည်းတွေထဲကမှ ထူးခြားတဲ့ Slot တစ်ခုအကြောင်းလေးပြောပြချင်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့နာမည်ကတော့ Orient Animals ပါ။ နာမည်အတိုင်းပဲ တောတောင်ထဲမှာနေရာယူထားပြီးတော့ တောတွင်းတိရိစ္ဆာန် Symbol လေးတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သာမန် တောတွင်းတိရိစ္ဆာန်လေးတွေမဟုတ်ပဲ၊ Nature နဂါး၊ ရေနဂါး၊ မီးငှက် အစရှိတဲ့ အံ့အားသင့်ဖွင့် အကောင်လေးတွကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဒီကစားနည်းက Row 3…
Khin Hsu January 16, 20202Comments
မျောက်ဘုရင်ကြီး စွန်းဝူခုန်း ဆိုရင်တော့ မသိတဲ့လူမရှိလောက်ပါဘူး။ တရုတ် ဒဏ္ဏာရီထဲက မျောက်ဘုရင်ကြီး ဝူခုန်းရဲ့ဇာတ်လမ်းက စာအုပ်၊ ဇာတ်လမ်းတွေအများကြီး အမျိုးမျိုးထွက်ခဲ့ပြီးပြီဖြစ်လို့ နိုင်ငံတိုင်းလိုလိုမှာ သိပြီးသားဖြစ်နေပါပြီ။ အခုဆိုရင်တော့ မျောက်ဘုရင်ကြီးရယ်၊ ဆရာတော်ရယ်၊ ဘုရင်ကြီးရဲ့ နာမည်ကြီးလှတဲ့ ပါဝါပြင်းတုတ်တို့ဟာ Monkey King Slot ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ Slot ကစားနည်းအသွင်ကိုပြောင်းလာခဲ့ပြီနော်! Row3ခု Reel 5…
Lucky Racing Slot
Khin Hsu January 12, 2020 1 Comment
ဒီတစ်ခေါက်မိတ်ဆက်ပေးမယ့် Slot ကစားနည်းလေးကတော့ ကားပြိုင်ပွဲတွေအပေါ်မှာအဓိကအခြေခံထားပြီးတော့ တစ်ကယ်ကို ကိုယ်တိုင်ပြိုင်နေရသလိုမျိုး Slot လှည့်နေရင်းနဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားစေမယ့် Slot လေးတစ်ခုပါ။ သူ့နာမည်ကတော့ Lucky Racing ပါတဲ့။ Payline ကအရမ်းကိုရိုးရှင်းလွန်းတဲ့ Payline9line စနစ်ကိုအသုံးပြုထားတာနော်! Payline နည်းတယ်ဆိုပြီး ပြန်ရနှုန်းကိုတော့ အထင်မသေးလိုက်ပါနဲ့။ အများဆုံး 10000X အထိတောင်ရနိုင်တာဗျို့! ဒါကြောင့် ပြိုင်ကားရောင်စုံလေးတွေနဲ့…
Mah Jong Slot
Khin Hsu January 10, 2020 1 Comment
Mah Jong ဆိုရင်တော့ မသိတဲ့လူမရှိလောက်ဘူးထင်ပါတယ်။ 20 ရာစုအစောပိုင်း တရုတ်နိုင်ငံ Qing မင်းဆက် အချိန်ဝန်းကျင်မှာ စပြီးဖန်တီးခဲ့တဲ့ အကွက်ချကစားနည်းတစ်ခုပါ။ ကစားသူ ၄ ယောက်နဲ့ကစားလေ့ရှိကြပါတယ်။ ဖန်တီးခဲ့ချိန်ကစပြီး လူကြိုက်များအောင်မြင်ပြီးတော့ ယနေ့ခေတ်အထိတောင် မပျောက်ပျက်ပဲ အောင်မြင်လျက်ရှိပါတယ်။ ဒီကစားနည်းအပေါ်အခြေခံပြီးတော့ ကစားနည်းမျိုးစုံ ပေါ်ထွက်လာခြင်းရှိသလိုပဲ Slot ကစားနည်းအနေနဲ့လဲ မြင်ရပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ 16800x အထိ Top…
FIFA World Cup ပြိုင်ပွဲအကြောင်း
Premier League အကွောငျး
Sport Betting System တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ခြင်း
Subscribe to Myanmar Online Game